Phinda uthole idatha ye-Outlook kumafayela we-Virtual Machine Disk, Amafayela Okusekelayo namafayela Ezithombe zeDiski
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Phinda uthole idatha ye-Outlook kumafayela we-Virtual Machine Disk, Amafayela Okusekelayo namafayela Ezithombe zeDiski
Uma i-Outlook PST / yakhoOST ifayela ligcinwa kufayela elilandelayo:
Ifayela le-VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) (*. Vmdk). Isibonelo, ugcina i-Outlook PST /OST ifayela kudiski ebonakalayo ku-VMWare.
Ifayela le-Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. Vhd). Isibonelo, ugcina i-Outlook PST /OST ifayela kudiski ebonakalayo ku-Virtual PC. Noma wenza isipele se-Outlook PST / yakhoOST ifayela nge-Windows Backup nokubuyisela umsebenzi.
Ifayela le-Acronis True Image (*. Tib)
I-Norton Ghost ifayela (*. gho, * .v2i)
Ifayela le-Windows NTBackup (*.bkf)
Ifayela lesithombe le-ISO (*. Iso)
Ifayela lesithombe sediski (*. Img)
Ifayela lesithombe seCD / DVD (*. Bin)
Ifayela le-Alcohol 120% Mirror Disk File (MDF) (*. Mdf)
Ifayela lesithombe seNero (*. Nrg)
futhi awukwazi ukufinyelela idatha ku-PST /OST file ngezizathu ezithile, ngokwesibonelo:
Ususa i-Outlook PST /OST ifayela kusuka kudiski ebonakalayo ku-VMWare noma i-Virtual PC.
Ufometha idiski ebonakalayo ku-VMWare noma kwi-Virtual PC ngephutha.
Idiski ebonakalayo ku-VMWare noma i-Virtual PC ayikwazi ukukhishwa noma ukwethulwa kahle.
Idiski ebonakalayo ku-VMWare noma i-Virtual PC yonakele noma yonakele.
Ifayela lokusekelayo kwimidiya yokusekelayo lonakele noma lilimele futhi awukwazi ukubuyisela i-PST yakhoOST fayela kuyo.
Ifayela lesithombe sediski likhohlakele noma lilimele futhi awukwazi ukubuyisa i-PST /OST fayela kuyo.
Futhi okuningi okuningi…
Ngemuva kwalokho usengathola imininingwane ku-PST /OST ifayela ngokuskena nokuthola kabusha ifayela elihambisanayo lomshini wediski, ifayela lokulondoloza noma ifayela lesithombe sediski nge DataNumen Outlook Repair. Vele ukhethe ifayela lomshini wediski elibonakalayo, ifayela lokusekelayo noma ifayela lesithombe sediski njengefayela lomthombo elizolungiswa, DataNumen Outlook Repair izoskena ifayili eliwumthombo, liyihlaziye, libuyise idatha ye-Outlook egcinwe kufayela, bese ilikhiphela kufayela elisha le-PST elilungisiwe.
Uma i-Outlook PST / yakhoOST ifayela ligcinwa kwi-hard disk noma idrayivu, futhi awukwazi ukufinyelela ku-PST /OST file ngezizathu ezithile, ngokwesibonelo:
Ususa i-Outlook PST /OST ifayela kusuka kwi-hard disk noma idrayivu.
Ufometha i-hard disk noma idrayivu ngephutha.
I-hard disk noma idrayivu yakho yehluleka futhi awusakwazi ukufinyelela amafayela.
Ngemuva kwalokho ungasebenzisa DataNumen Disk Image ukwakha isithombe sediski noma idrayivu, bese uthola i-PST /OST idatha kusuka kufayela lesithombe nge DataNumen Outlook Repair.